को’रोना सं’क्रमणबाट नेपालमा एक महिलाको मृ’त्यु भएपछि स्थानीयमा आ’तंक छायो ! गाउँ नै त्र’सित – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/को’रोना सं’क्रमणबाट नेपालमा एक महिलाको मृ’त्यु भएपछि स्थानीयमा आ’तंक छायो ! गाउँ नै त्र’सित
को’रोना सं’क्रमणबाट नेपालमा एक महिलाको मृ’त्यु भएपछि स्थानीयमा आ’तंक छायो ! गाउँ नै त्र’सित
सिन्धुपाल्चोक । को’रोना भा’इरस (कोभिड–१९) को सं’क्रमणका कारण जिल्लाकी एक महिलाको बिहीबार राति उपचारको क्रममा मृ’त्यु भएपछि ती महिलाको प्रारम्भिक उपचार गरिएको अस्पताल तथा गाउँक्षेत्रमा उच्च सर्तकता अपनाइएको छ। जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुरुप सं’क्रमण फैलिने त्रा’समा बलेफी गाउँपालिका वडा ७, ८ देखि बाह्रबिसे नगरपालिका, बाह्रबिसे प्राथामिक स्वाथ्य केन्द्रलाई सिल गरिएको छ।
बाह्रबिसे नगरक्षेत्रकी सुत्केरी महिला को’रोना भा’इरस सं’क्रमणका कारण मृ’त्यु भएको खबरले सबैजना त्र’सित बनेका छन्। ‘स्थानीय एकदमै आ’तंकित बनेका छन् । सचेतना अपनाउनको लागि सल्लाह दिइरहेका छौं । गाउँदेखि बजारसम्मै डरले बाहिर निक्लिएका छैनन्,’ बाह्रबिसे नगरपालिका वडा ९ का अध्यक्ष सानु लामाले भने । स्थानीयको सुरक्षाको लागि सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीलाई गुर्हार्दै यसबारे नगरभरका जनप्रतिनिधि छलफलमा जुटिरहेको उनले जनाए ।
२९ वर्षकी महिलाले बैशाख २३ गते काठमाडौंको महराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा बच्चा जन्माएकी थिइन्। शिक्षण अस्पतालबाट २४ गते डिस्चार्ज भएलगत्तै एम्बुलेन्सबाट बाह्रबिसे फिरेकी उनी बिहीबार बिहानदेखि बिरामी परेकी थिइन्।
निजी बोलेरोबाट उपचारर्थ बाह्रबिसे बजार आइपुगेकी उनलाई ज्वरो, रुघाखोकी र स्वासप्रस्वासमा स’मस्या भएर अवस्था जटिल बनेपछि तत्कालै काभ्रेको धुलिखेल अस्पताल रिफर गरिएको बाह्रबिसे नगरस्थित बाह्रबिसे प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रकी डा सिर्जना मर्हजनले बताइन्। आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ।
‘एकचोटी बुवाको श,व फोनमा देखाइदिनु न भन्नुभयो, सुनेर मनै कुँ’डियो’